Ny iPhone 5 dia afaka mivarotra singa 10 tapitrisa amin'ity taona ity | Vaovao IPhone
Satria manakaiky ny daty voatondro amin'ny 15 martsa fa tsy nohamafisin'ny lehilahy Cupertino tamin'ny fomba ofisialy betsaka ny tsaho sy vaovao mifandraika amin'ity fitaovana vaovao 4-inch ity izay, raha marina ny tsaho, dia hamely ny tsena amin'ny 18 martsa, telo andro monja aorian'ny fampisehoana ofisialy ilay fitaovana miaraka amin'ny iPad Air 3.
Raha ny filazan'ny mpandalina Amit Daryanani ao amin'ny RBC Capital Markets, ity fitaovana vaovao ity afaka amidy mandritra ny taona voalohany eny an-tsena 10 tapitrisa singa, satria afaka namaky tamin'ny tatitra izahay fa nalefany tamin'ny mpampiasa vola. Ao anatin'io fanamarihana io ihany koa dia manamafy i Amit fa ity fitaovana vaovao kely kokoa ity dia mety hampihena ny varotra ny fitaovana lehibe kokoa, fa kosa hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampitomboana ny isan'ny varotra ao amin'ny fitaovany voalohany.
Amit mino fa mety ho mpanjifa mety amin'ity fitaovana ity dia ireo mpampiasa ilay maodely iPhone 5c sy iPhone 5s, fa noho ny haben'ny efijery dia tsy te-hanavao ny fitaovany amin'ny maodely vaovao izy ireo, fa ho hitan'izy ireo ity fitaovana vaovao ity miaraka amina processeur nohavaozina sy fiasa vaovao mamela ireo mpampiasa ireo hankafy ny vaovao farany natolotr'i Apple. ny fanavaozana ny iOS 9 farany.
Saingy tsy ho an'ny mpijery ihany no itodihana azy fa ny fikasan'i Apple dia ny hanokana ity fitaovana ity any amin'ny firenena vao misondrotra toa an'i India, izay toerana nijanonan'ny tovolahy avy any Cupertino tamin'ny fivarotana ny maodely iPhone efa ela indrindra toy ny 4s sy 5c, modely ampiasain'ny orinasa ho fitaovana fampidirana ho an'ny orinasa hanandramana hamandrihana ny mpanjifa amin'ny ekosistra Apple.
Saingy tsy misy iray volana ho an'ny fampisehoana ny iPhone 5se vaovao, toa fanapahan-kevitra mampidi-doza tokoa ny misintona ireo maodely ireoHatramin'izao fotoana izao any India dia afaka mahita terminal any amin'ny vidiny mitovy amin'izany isika amin'ny Motorola, Samsung, OnePlus ary fitaovana marobe avy amin'ireo mpamokatra sinoa. Tokony ho ao an-tsaina fa i India dia manana mponina 1.300 miliara, tsena lehibe amidy finday maro isan-karazany isan'andro, fitaovana izay ajanon'ny Apple amin'ny famoahana azy ireo amin'ny tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone SE » Ny iPhone 5 dia afaka mivarotra singa 10 tapitrisa amin'ity taona ity
Ie, nilaza toy izany koa ianao tamin'ny 5c, sa tsy izany?
Apple dia mila manao izany tsara mba hividianan'ny olona iPhone misy kalitao ambany amin'ny vidiny lafo be!
Na mety tsia
HAHAHA !! OMG… tsara kokoa noho ny klioban'ny hatsikana io.